Aragtidiisa Mourinho & Guardiola, Kudbadii Uu Finalkii CL Yeediyay, Taatikadii Barca Looga Saaray Iyo Samuel Eto'o Oo Wax Badan Iftiimiyay. - Gool24.Net
Aragtidiisa Mourinho & Guardiola, Kudbadii Uu Finalkii CL Yeediyay, Taatikadii Barca Looga Saaray Iyo Samuel Eto’o Oo Wax Badan Iftiimiyay.
Samuel Eto’o ayaa shaaca ka qaaday taatikadii layaabka lahayd ee uu Jose Mourinho u adeegsaday si uu Barcelona uga soo saaro isla markaana uu Inter Milan ku keensaday.
Barcelona ayaa qaladkii ugu waynaa samaysay markii ay Ibrahimovic oo aan hanaankiisa ciyaareed ku haboonayn kooxdeeda ay dhaafsatay Samuel Eto’o oo waqti layaableh ku soo qaatay Camp Nou laakiin Mourinho ayaa sameeyay arin xeelad fiican ah.
Markii uu Mourinho helay Eto’o waxaa u suurtogashay in saddexda koob oo ay Champions league iyo Serie A ku jiraan ay Inter Milan hal xili ciyaareed kula wada guulaysteen.
Waraysi uu Eto’o siiyay wargayska Gazzetta dello Sport oo aad u dheer ayuu ku shaaciyay qaabkii uu Mourinho isaga u qanciyay wuxuuna yidhi: “Mourinho waxa uu aniga igu qanciyay qaab aad u sahlan. Waxa uu ii soo diray sawirka garanka No.9 ka wuxuuna ii soo qoray isaga oo sheegaya:”Adiga ayaa iska leh, adiga ayuu ku sugayaa”.
Kadib maxaa dhacay? Eto’o sharaxaad sii bixinaya ayaa yidhi: “Kadib waxaa fariin ii soo diray [Marco] Materazzi isaga oo sheegaya: ‘ Haddii aad timaado Inter, wax walba waynu ku guulaysan doonaa”.
Laakiin Eto’o ayaan markaas garan [Marco] Materazzi wuxuuna yidhi: “Anigu maan hayn isaga lambarka telefoonkiisa, sidaa daraadeed waxaan waydiiyay Albertini- ma kaagiibaa?. Waxyaabaha sidan oo kale ahi waayahayga ciyaareed oo dhan igumay soo dhicin fariintaasina miisaan culus wayay ku qaaday go’aankaygii”.
Samuel Eto’o ayaa ka hadlay soo laabashadiisii Camp Nou ee Champions League ee xili ciyaareedkii xigay markii uu Barca ka baxay wuxuuna yidhi:”Markii casaanka lagu saaray Thiago Motta, Mourinho waxa uu noo yeedhay aniga iyo Javier Zanetti wuxuuna noo sharaxay sida loo ciyaarayo, waxaan naftayda ku idhi: “Wax walba bixi isla markaana finalka ayaan soo gaadhi doonaa. Dhamaadkii waxaanu nimid finalkii”.
Samuel Eto’o ayaa soo bandhigay khudbadii uu ciyaartoyda Inter Milan u jeediyay ka hor finalkii Inter iyo Bayern Munich ee finalkii Champions league wuxuuna yidhi: “Khudbadaydi finalkii may ahayn mid dheer, si sahlan waxaan ugu sheegay: ” Finalka lama ciyaaro, waa la guulaystaa, garoonka ayaan ku dul dhimanaynaa waxaanan koobka keenaynaa Milan, aa waan dhimanaynaa sababtoo ah kuma laaban doono Milan. Sidaa daraadeed, aan ku laabanayo inaga oo koobka sidana”.
Samuel Eto’o oo aan xidhiidh fiican la soo yeelan macalinkiisii hore ee Pep Guardiola ayaa la waydiiyay in uu isbarbar dhigo Mourinho wuxuuna yidhi: “Halka arin ee ay iskaga midka yihiin labada tababare waa rabitaankooda in ay guulaystaan. Gabi ahaanba shaqsiyadoodu way kala duwan tahay waxayna leeyihiin aragti kubbada cagta ah oo kala duwan”.